Senatera Pakistaney Nandrahona Hanolana Mpikatroka Tamin’ny Fandaharana Mivantana Amin’ny Fahitalavitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Jona 2016 10:13 GMT
Senatera Hamdullah, Mpisolovava Masroor, ary Marvi Sirmed nandritra ny adihevitra. Sary: Dawn News
Nandritra ny fandaharana resadresaka tao amin'ny fahitalavitra tamin'ny Zoma 10 Jona, nanao vava tamin'i Marvi Sirmed, mpanadihady ny fandaharana sy mpikatroka ny zon'olombelona ilay Senatera Pakistaney Hafiz Hamdullah, ary nandrahona hanolana ilay vehivavy mihitsy aza. Niteny ratsy tao amin'ny fahitalavitra tamin'ireo mpanohitra politika taloha i Hamdullah, solontenan'ny antoko politika ara-pivavahana Jamiat-i-Ulema Islam-i-Fazl (Jui-F).
Fotoana fohy taorian'ny fandraketana ny fandaharana, nanoratra momba ny zava-nitranga tao amin'ny Facebook i Sirmed, ka niteraka resabe sy nitarika tatitra tany amin'ny polisy ary antso fitoriana ny Senatera Hamdullah:
Vao avy nandalo zava-niainana mampahonena aho tamin'ny fandaharana News One (Fandaharan'i Nadia Mirza) raha tezitra tamin'ny fanehoan-kevitry ny mpisolovava Masroor i Hafiz Hamdullah avy ao amin'ny JUIF. Rehefa tonga ny fotoana nitenenako, nanomboka ny fanehoan-kevitra tamin'ny hoe: “miombon-kevitra amin'i Masroor Sahib aho amin'ny filazana fa …”, ary avy eo notapahan'i Hamdullah aho ary nanohy hatrany ny avonavonany sy ny tsy fahalalam-pombany izy. Saika namaly tamin'ny fomba mitovy aho raha nanomboka nihoa-pefy tamin'ny ompa ratsy indrindra izy. Niantso ahy ho vehivavy janga izy ary nilaza hoe: “tumhaari shalwaar utaar dooN Ga aur tumhaari maaN Mpanj Bhi” (ho esoriko ny patalohanao sy ny an'ny reninao). Naveriko ho any amin'ny vehivavy fianakaviany izany. Ary avy eo niezaka nidaroka ahy izy. Voarakitra ao anaty kamera avokoa izany rehetra izany. Notazonin'i Fayaz ul Hassan Chauhan izy ka tsy nahazo ahy ny tanany saika hidaroka. Tsy maintsy noesorin'ny mpiambina ny News One izy.
Ary nifady hanina ity mpivarotra ara-pivavahana ity raha nanao izany rehetra izany.
Mahatsikaiky, nitranga izany rehetra izany raha noraketina ny fandaharana natokana ho an'ny adihevitra ao Pakistan mikasika ilay antsoina hoe “famonoana olona noho ny fiarovam-boninahitra” (famonoana atao amin'ny fianakaviana, indrindra fa ny ankizivavy na vehivavy, izay hita fa nitondra fahafaham-baraka ho an'ny fianakaviana) sy ny fahanginan'ny Filankevitry ny Fotokevitra Silamo (CII) manoloana ny olana- ny CII dia fikambanana ahitana mpikambana 20 natsangana tamin'ny taona 1962, izay manome torohevitra tsy voatery hotanterahina ho an'ny governemanta mikasika ny lafiny ara-pivavahana amin'ny lalàna sy ny fiaraha-monina. Nahazo tsiny ihany koa ny CII noho izy tsy manaiky ny fisian'ny herisetra atao amin'ny vehivavy amin'ny ankapobeny.
Nahazo tsikera ny Filankevitry ny Fotokevitra Silamo vao haingana noho ny fandrafetana lalàna mamela ny lehilahy ‘hidaroka ny vadiny moramora’. Marihina fa i “Hamdullah, no filohan'ny Komitin'ny Fandrindrana Ara-pivavahana Iraisampinoana ao amin'ny Antenimieran-doholona.
Nandritra ny fandaharana tamin'ny fahitalavitra, nilaza tamim-panebahana ilay mpanolotra ny fandaharana Mpisolovava Masroor fa “Pee K soey Hue Hain‘” (matory rehefa avy mamo) ny Filohan'ny Mpitondra Fivavahana CII Maulana Sherani sy ny Senatera Hamdullah. Nanohy nitsikera ny CII noho ny fandeferana amin'ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy i Masroor. Nitodika tany amin'i Sirmed avy eo ny mpanolotra ny fandaharana ary nanontany ny heviny mikasika ny toeran'ny CII momba ny zon'ny vehivavy sy ny tsy fahombiazany amin'ny fanamelohana ny famonoana olona noho ny fiarovam-boninahitra. Niombo-kevitra tamin'i Masroor i Sirmed, nampahatezitra an'i Hamdullah, izay nanomboka nitabataba, izany. Nihamafy loatra ny tohan-kevitra ka nandrahona an'i Sirmed tamin'ny fanolanana i Hamdullah nony farany.
Ady teo amin'i Hafiz. Lahatsary: Shoaibvideos
Tsy nametraka ilay fandrahonana fanolanana sy ny ompa ny lahatsary efa nasiam-panovana. Nizara ny antsipirihan'ny fikasana hiherisetra ara-batana tao amin'ny pejiny Facebook sy tamin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra hafa i Sirmed. rehefa niampanga an'i Hamdullah tamin'ny heloka bevava. Na dia mbola tsy nivoaka aza ny lahatsary mampiseho ny fikasana hiherisetra ara-batana, nisioka nanohana an'i Sirmed ny mpisolovava Masroor ary nanamarina ny tantarany:
Talanjona raha nanatri-maso ny ompa mahatsiravina (fikasana hiherisetra ara-batana) nataon'i Hafiz Hamdullah tamin'i @marvisirmed tao amin'ny @10pmwNadiaMirza androany @nadia_a_mirza
Rehefa avy nizara ny tantarany i Sirmed, tonga nilaza momba ny herisetra nataon'i Hamdullah tamin'izy ireo ihany koa ny hafa maro.
Niaka-peo nanohana an'i Sirmed ny parlemantera Dr. Arif Alvi ary nizara ny zava-niainany manokana ihany koa:
Talanjona aho. Efa nandrahona ahy indray mandeha teny an-kalamanjana کہ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا ity lehilahy mpanararaotra ity (hotapahako ny lelanao) Mahamenatra. Tokony raràna amin'ny fahitalavitra.
Nitanisa ireo hafa niatrika herisetra tamin'i Hamdullah taloha ilay mpiserasera Rana Waleed, anisan'izany ireo mpanolotra fandaharana maromaro amin'ny fahitalavitra:
Hatramin'izao, ny olona efa norahonan'i Hafiz Hamdullah na nitenenany ratsy dia i:
Efa nanatontosa fandaharana maromaro niaraka tamin'i Hamdullah i Sirmed teo aloha, ary tsy mbola nanafina ny tsy fitovian-keviny marobe amin'ny politikany. Tamin'ity indray mitoraka ity anefa, tsy navelany tsotra izao hiteny i Sirmed, fa nampiasa fandrahonana herisetra mihitsy aza. Na dia eo aza ny lahatsary avy amin'ny Studio-n'ny fahitalavitra, nilaza ny maro tamin'ireo mpiserasera fa nihantsy ady i Sirmed. Ny mpanohana azy kosa, mandritra izany, manosika hatrany:
Tsy mampino fa manome tsiny ny lasibatra tamin'ny fifamalian'i Marvi Sirmed mifanandrina amin'i Hafiz Hamdullah ny olona kanefa mampiseho mazava ny lahatsary fa tsy nihantsy ady izy. Adala!
Ny tianao ambara izany dia mety ho simban'i Hafiz Hamdullah tamin'ny fomba feno habibiana sy tsy islamika i @marvisirmed
Izy no nanao herisetra fa tsy izaho. Izy no nitabataba fanolanana sy fandrahonana ho faty fa tsy izaho. Izy no niantsambotra hidaroka fa tsy izaho
Namaly azy ianao koa nahoana ianao ankehitriny no milaza fa tsy manan-tsiny? fa angaha moa tsy mitovy ny lehilahy sy ny vehivavy?
Niampanga ny zava-nitranga ny senatera Sherry Rehman ary namerina ny fitakiam-bahoaka mba handray fepetra ho an'ny senatera Hamdullah:
Eny @marvisirmed efa nandefa hafatra ho an'ny filohan'ny Antenimieran-doholona aho. Tsy tokony hisy senatera avela hiala maina amin'izao fotsiny
Nitaky ilay mpikatroka malaza ny zon'ny vehivavy Gulalai Ismail mba hosaziana araka ny lalàna ny Senatera Hamdullah noho ny fandrahonana an'i Sirmed. Tamin'ny lahatsoratra amin'ny Facebook, nizara ny hatezerany sy ny fahadisoam-panantenana momba ny fitondran-tenan'ny Senatera i Ismail:
Tsy vitany hoe nampiasa “fiteny manambany vehivavy” i Mullah Hafiz Hamdullah tamin'ny alalan'ny fanambarany handrahona hanolana an'i Marvi Sirmed sy ny reniny, fa manamafy ihany koa izy fa amin'ny maha-lehilahy manana fahefana amin'ny antoko politika ara-pivavahana manohana azy ao ambadika, dia afaka manolana vehivavy sy midaroka vehivavy eo aminy izy. Tsy tokony ho voaràra amin'ny haino aman-jery ihany izy, fa tokony hogadraina mandra-pahafaty satria mampidi-doza ho an'ny vehivavy rehetra.
Ny dika voalohan'ity lahatsoratra ity dia nilaza ny Senatera Hamdullah ho Hamdani, efa voahitsy ny fahadisoana ary novaina tamin'ny anarana tena marina.